လွတ်လပ်၍ အားကောင်းသော ရခိုင်လူငယ် အစုအဖွဲ့တစ်ရပ် ခိုင်မာစွာ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ရခိုင်လူငယ် ည? - Yangon Media Group
လွတ်လပ်၍ အားကောင်းသော ရခိုင်လူငယ် အစုအဖွဲ့တစ်ရပ် ခိုင်မာစွာ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ရခိုင်လူငယ် ည?
စစ်တွေ၊ မေ ၁
လွတ်လပ်၍ အားကောင်းသော ရခိုင်လူငယ်အ စုအဖွဲ့တစ်ရပ် ခိုင်မာစွာပေါ်ထွန်း လာစေရန် ရခိုင်လူငယ်ညီလာခံကို တောင်ကုတ်တွင် ၅ ရက်ကြာ ပြု လုပ်နေကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါညီလာခံကို တောင် ကုတ်မြို့ရှိ သိမ်တောင်မြို့မအား ကစားကွင်းတွင် မေ ၁ ရက်၊ နံနက် ၇ နာရီမှ စတင်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ် ပြီး မေ ၅ ရက်အထိ ငါးရက်ကြာ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
”ဒီလူငယ်ညီလာခံဟာ ကျန်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့လည်း အားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ရှေ့ဆက်လုပ်သွားမယ့်ညီလာခံ တွေရှိရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ ဒီထက်မကပိုပြီးတော့ ပါဝင်လာ နိုင်အောင် ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစား ကြမယ်။ ကြိုးစားကြတဲ့အချိန်မှာ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ ကျွန်တော် တို့ကို ထောက်ခံအားပေးဖို့ကို ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်”ဟု ညီလာခံ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကို မျိုးဆန်းအောင် က ပြောသည်။
အဆိုပါညီလာခံကို လွတ်လပ်၍အားကောင်းသော ရခိုင်လူ ငယ်အစုအဖွဲ့တစ်ရပ် ခိုင်မာစွာ ပေါ်ထွန်းလာစေရန်၊ ရခိုင်လူငယ် များစွမ်းရည်မြင့်မားပြီး ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ထိရောက်စွာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လာနိုင်စေရန်နှင့် ရခိုင် အပါအဝင် ဘဝတူတိုင်းရင်းသားများ၏ မူလရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများရရှိလာစေရန်အတွက် အခြား သော တိုင်းရင်းသားများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်စေရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်သုံးရပ်ဖြင့် ပြုလုပ်နေခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကျင်းပနေဆဲ အဆိုပါညီလာခံတွင် လူငယ်နှင့်နိုင်ငံရေး၊ လူငယ်နှင့် ပညာရေး၊ လူငယ်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ လူငယ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးစသည့် ကဏ္ဍလေး ခုကိုဆွေးနွေးနေကြကြောင်းလည်း တက်ရောက်နေသူများက ပြောသည်။
”ဒီညီလာခံမှာ အခုလိုအ ခန်းကဏ္ဍလေးခုကို ဆွေးနွေးခြင်း အားဖြင့် ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်သွား နိုင်တယ်။ အဲဒီလိုမြင်သွားတဲ့ အခြေ အနေမှာ follow up action အ နေနဲ့ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိသွားနိုင်တဲ့အတွက်စုပေါင်းညီညာနဲ့ လုပ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရလာနိုင်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်”ဟု ညီလာခံသို့ တက်ရောက်နေသည့် လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ညီလာခံအတွင်းဆွေးနွေးမှု ဘုံသဘောတူညီချက်ကို ညီလာခံ နောက်ဆုံးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ညီလာခံ ကျင်းပရေးကော်မတီက ပြောသည်။ အဆိုပါညီလာခံသို့ ရခိုင်ပြည် နယ် မြို့နယ်အသီးသီးနှင့် ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီနှင့် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝဒေသမှ လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် ရခိုင်ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ကိုယ်စားလှယ် များ၊ ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်နယ် လွှတ်တော်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တောင်ကုတ်မြို့မိ၊ မြို့ဖနှင့် ရခိုင် သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာအေး ချမ်းတို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
စာချုပ်သက်တမ်း အနည်းဆုံး နှစ်နှစ်တိုးရန် ဖယ်လိုင်နီတောင်းဆိုထား
ဘရာဇီးနိုင်ငံ ဆာအိုပေါ်လိုတွင် မီးလောင်ကျွမ်းပြီး အဆောက် အအုံပြိုကျ၊ တစ်ဦးသေဆုံး၊ သုံးဦး
မိုင်းခွဲ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသော သမဂ္ဂအဆောက်အအုံနေရာကို သမိုင်းဝင်နေရာအဖြစ် သာ ထားရှိရန် အများစ??
ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမှာ ရှောင်မန်ဒီစ်နဲ့အတူ သီချင်းဆိုဖို့ ရှိနေတဲ့ မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ လုံခြုံစိတ်ချရသည့် သွားလာနေထိုင်မှုဖြစ်စေရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တ??
ပို့ဆောင်/ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ပြွေကးမြီဆပ်ရန် ကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၆ဝဝ ကျော်ကျန်
လင်ဒီလော့ဖ်ကို လစာနှစ်ဆပေး၍ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုရန် မန်ယူပြင်ဆင်နေ